Miswe 4.20 Inosvika Ne Shanduko Kune Iyo Tor Kubatanidza Maitiro, Mapakeji Ekuvandudza Uye Zvimwe | Linux Vakapindwa muropa
Shanduro itsva ye Miswe 4.20 yakatoburitswa kare uye mune iyi vhezheni nyowani yekuparadzira mukuwedzera kune izvo zvekuvandudzwa kwezvinhu zvehurongwa izvo iyo nyowani vhezheni yeLinux 5.10.46 yakasimbiswaIko shanduko mune yekubatanidza maitiro kune iyo Tor network inoratidzwawo.
Kune avo vasina kujairana neMiswe, iwe unofanirwa kuziva kuti izvi ndizvo kugovera uko kunobva pane hwaro hweDebian 10 package y yakagadzirirwa kupa kusazivikanwa kuwana kune network, kuitira kuchengetedza zvakavanzika uye kusazivikanwa kwemushandisi pane network.
Asingazivikanwe kuburitswa kubva kuMiswe kunopihwa naTor Mukubatana kwese, sezvo traffic kuburikidza neTor network, ivo vanovharirwa nekusarongeka nepaketi firita, iyo mushandisi isingasiye trace pane network kunze kwekunge ivo vachida neimwe nzira. Encryption inoshandiswa kuchengetedza mushandisi data mune chengetedza mushandisi dhata modhi pakati pekutanga, pamusoro pekuburitsa akateedzana maficha akafanogadzirirwa akagadzirirwa kuchengetedzeka uye kusazivikanwa kwemushandisi, senge webhurawuza, iyo tsamba mutengi, an pakarepo meseji mutengi pakati pevamwe.
1 Main nyowani maficha eMiswe 4.20
2 Dhawunirodha Miswe 4.20
2.1 Maitiro ekuvandudza kune iyo nyowani vhezheni yeMiswe 4.20?
Main nyowani maficha eMiswe 4.20
Mune vhezheni itsva yeMiswe 4.20 iyo Tor network yekubatanidza maitiro yashanduka zvachose, kubvira kubva ikozvino zvichienda mushure mekubatana kunetiweki yemuno kuoneka, Tor yekubatanidza wizard inotanga, iyo inokutendera iwe kusarudza pakati otomatiki yekubatanidza modhi uye inowedzerwa zvakavanzika maitiro.
Iyi shanduko diki, ivo vanogadzira vanotaura izvozvo inokutendera kuti uvanze chokwadi chekushanda kuburikidza neTor vanoongorora traffic padandemutande remuno, pamwe neiyi wizard yekubvumidza inokutendera kuti ubatanidze kubva kumasaiti akaongororwa kuburikidza nematanho akavharika ekudzivirira kuvhara pasina kushandura marongero ekutanga.
Izvo zvinotaurwa zvakare kuti mune ramangwana zvinokwanisika kuchengetedza runyorwa rwegedhi zambuko kune inoramba ichichengeterwa, kuongorora hutano hweiyo isina waya netiweki, sarudza kubatana uchishandisa iyo nhapwa portal, uye uwane ruzivo pane nyowani zambuko magedhi.
Dzimwe shanduko dzinomira pachena yeiyi nyowani vhezheni yeMiswe 4.20 ndiko kuiswa kwe Linux kernel 5.10.46, vhezheni iyo yakawedzerwa kuvandudzwa mukutsigirwa kwehardware uye pamusoro pezvimwe zvidiki matambudziko akagadziriswawo.
Isu tinogona zvakare kuona kuti iyo yekuvandudza kwesicelo yekugovana mafaera yaive yakaverengerwa Onion Govera 2.2, vhezheni inoratidzira kugona kushandisa OnionShare sewebhu server kushandira mapepa ematanho.
Iyo shanduro dzeKeePassXC 2.6.2 password maneja, iyo Tor 10.5.2 browser, iyo Thunderbird 78.11.0 tsamba mutengi, Tor 0.4.5.9 uye mamwe masystem mapakeji akagadziridzwa zvakare.
Finalmente kana iwe uchifarira kuziva zvakawanda nezvazvo yeiyi nyowani vhezheni yeMiswe, unogona kutarisa ruzivo Mune inotevera chinongedzo.
Dhawunirodha Miswe 4.20
Si iwe unoda kuyedza kana kuisa iyi nyowani vhezheni iyi yekuparadzirwa kweLinux pakombuta yako, Iwe unogona kuwana iyo mufananidzo weiyo system iyo yatove kuwanikwa kubva kune yayo yepamutemo webhusaiti mune yayo yekuodha chikamu chikamu, chinongedzo ndeichi.
Mufananidzo wakawanikwa kubva muchikamu chekurodha chiri 1.1 GB ISO chifananidzo chinokwanisa kushanda mune live mode.
Izvo zvakakoshawo kuti utarise kuti iyi vhezheni nyowani yeMiswe 4.20, sevakawanda vayo vayakatangira, inogadzirisawo mamwe maburi ekuchengetedza, saka vagadziri vayo vanokurudzira zvakasimba kuti iwe uvandudze iyi vhezheni itsva kana iwe uri mune yakapfuura.
Maitiro ekuvandudza kune iyo nyowani vhezheni yeMiswe 4.20?
Kune avo vashandisi vane vhezheni yechinyakare yeMiswe yakaiswa uye vanoda kusimudzira kune iyi vhezheni itsva. Ivo vanofanirwa kuziva kuti iko kusimudzira kwakananga kuMiswe 4.20 kunogona kuitwa zvakananga kubva kuMiswe 4.14 kana kupfuura.
Kune izvi ivo vanogona kushandisa yavo USB chishandiso icho chavaishandisa kuisa Miswe, vanogona kubvunza ruzivo kuti vatakure kufamba uku pakombuta yavo. Mune inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Miswe 4.20 inosvika ine shanduko kune iyo Tor yekubatanidza maitiro, mapakeji ekuvandudza uye nezvimwe
Wepamusoro 500: mushure megore rimwe Fugaku ichiri pamusoro pechinyorwa